महिला भएर जन्मिएकोमा भाग्यमानी मान्छु - फ्रन्टलाईन नेपाल
Featured 03 अन्तरवार्ता
महिला भएर जन्मिएकोमा भाग्यमानी मान्छु
८ माघ २०७६, बुधबार १६:५८ January 22, 2020 फ्रन्टलाईन नेपाल Comment(0)
शैली बस्नेत, स्ट्यान्डअप कमेडियन
पत्रकारिता छाडेर कमेडीतिर किन लाग्नुभयो ?
आफ्नो रुचि फलो गर्दै जाँदा यहाँ पुगियो । यसको पनि ठेगान छैन । खोला जस्तै बग्दै जाँदा कहाँ पुगिन्छ, कहिले पहाड कहिले मैदान, कहिले झरना बन्न पुगिन्छ । एउटै पेशामा लागेर केश फुलाउनुपर्छ भन्ने पनि छैन ।
मानिसहरूलाई हँसाउन सजिलो कि रुवाउन ?
सजिलो त रुवाउन नै हो । दुनियाँमा दुःखको कमी छैन । कहिले भुइँचालो, कहिले नाकाबन्दी । हँसाउन कला चाहिन्छ, मेहनत गर्नुपर्छ ।
जनावरले मानिसको भाषा बुझ्ने भए कुन जनावरसँग कुरा गर्नुहुन्थ्यो ?
जनावरले मानिसको भाषा पक्कै बुझ्छ । मलाई चाहिँ सर्पसँग संवाद गर्न मन छ । सर्प साइलेन्ट वाचर जस्तो लाग्छ । रुखको टोड्कोमा, कताकता कुनामा लुकेर बसेको हुन्छ ।
भगवानले एयरहोस्टेस, पाइलट तथा चरामध्ये एउटा बन्ने अवसर दिए कुन रोज्नुहुन्थ्यो ?
पाइलट नै रोज्छु । मैले स्यापियन्स शीर्षकको पुस्तकमा पढेकी थिएँ– चरा उडे पनि सबै कुरा उसको नियन्त्रणमा हुँदैन । मानिसले हवाइजहाज नै उडाउन सक्छ । मानिससँग नै असीमित क्षमता र सम्भाबनाहरू छन् । जहाज चढ्दा पनि खासै डर लाग्दैन मलाई ।
मन रोज्नुहुन्छ कि धन ?
अहिलेको समयमा चाहिन त दुवै चाहिन्छ । अहिलेलाई धन रोज्ने, त्यो पुगेपछि मनभन्दा पनि पर पुगेर ज्ञानी, महात्माको बाटो रोज्ने ।
केटी बनेर जन्मिएको पछुतो लाग्छ कि लाग्दैन ?
लाग्दैन, हाम्रो पुस्ताभन्दा अगाडिको समाजमा योगमाया जस्ता पात्र थिए । महिला पछाडि पर्नुपर्ने कारण छैन । महिला हुनुमा खुसी नै छु, म एकदमै उत्साहित छु । ऊर्जा नै ऊर्जाले भरिएको मान्छु म आफूलाई । कुन हिमाल चढौं, कुन आकाश चुमौं जस्तो लाग्छ । उर्जाको सीमा नै छैन । म आफूलाई एकदमै भाग्यमानी छु । १२ वर्ष भयो मैले सगरमाथा चढेको । मैले यसबीच समाजका चर्चित मानिसहरूसँग काम गर्न पाएकी छु । मेरो वरिपरिको उदाहरणीय मानिसहरूसँग काम गर्न पाएँ । नेपाली समाजका गुमनाम रोल मोडलहरूसँग काम गर्न पाइरहेको छु जसले मौन क्रान्ति ल्याईरहनु भएको छ ।
डेट गैरहेका बेला बुबा, आमाले देख्नुभयो भने के प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ ?
अहिले त मेरो विवाह भएको ८ वर्ष नै भैसक्यो । तपाईंको प्रश्न त्यही हुन्छ कि परिवर्तन हुन्छ ? जब हामी (म र श्रीमान्) रिलेसनसिपमा थियौं, त्यो बेला पनि मेरो परिवार खुसी थियो । कुनै आपत्ति थिएन । त्यसको कारण छ, सानैदेखि म आफ्नो निर्णय आफैं लिन्थें । मलाई कसैले रोकेन । दुःख पाएपनि, सुख पाए पनि म आफ्नो निर्णय आफैं गर्थें । कसैले गुनासो गरेपनि मलाई अरूको कुराले फरक पर्दैन । एक बारको जुनी हो, अरूको कुरा सुनेर के बस्नु ?
निदाइरहेका बेला सपनामा सबैभन्दा बढी के देख्नुहुन्छ ?
समग्रमा उडेको सपना बढी देख्छु । हिमाल–पहाड पुगेको, शाहसिक यात्रामा गएका देख्छु । प्रकृतिमा रमाएको सपना देख्छु ।
आफ्नो जिन्दगीमा भोगेका कुराले बढी रुवाउँछ कि चलचित्रका कथाले ?
म आफ्नो जीवनमा कमै रुन्छु । सजिलै त चलचित्रका कथाले रुवाउँछन् । आफ्नो जीवनमा त जिम्मेवार भइन्छ । त्यो अवस्थालाई कसरी सहज बनाउने भनेर सोचिन्छ । आफ्नो वास्तविक जीवनमा दुःख पर्दा म रुन्न । पछिल्लो पटक मेरो नजिकको मानिस बित्दा रोएँकी थिएँ अनि म बिफोर यु अंग्रेजी चलचित्र हेर्दा पनि रोएँ ।
Featured 03 खेलकुद समाचार
फेरि प्रशिक्षक बने म्याराडोना
२१ भाद्र २०७६, शनिबार १६:३२ September 7, 2019 फ्रन्टलाईन नेपाल
अर्जेन्टिनाका पूर्व फुटबलर डिएगो म्याराडोना फेरि प्रशिक्षक बनेका छन् । उनी अर्जेन्टिनाको क्लब जिम्नेसियाका प्रशिक्षक बनेका हुन् । म्यारोडोनाले यसै वर्षको जुनमा मेसिक्सकोको बी डिभिजन क्लब डोराडोसको प्रशिक्षकबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यतिबेला उनले आफ्नो स्वास्थ्यका कारण राजीनामा दिएको बताएका थिए । ९ महिना मेक्सिकोको डोराडोसको प्रशिक्षक भएर काम गरेका थिए । अर्जेन्टिनाको क्लब जिम्नेसियाले ट्वीट गर्दै […]
महेश बाबुका फ्यानका लागि ठूलो सप्राइज !
१२ चैत्र २०७५, मंगलवार १०:२३ March 26, 2019 फ्रन्टलाईन नेपाल
चैत १२ , काठमाडौं । सुपरस्टार महेश बाबुका फ्यानका लागि एउटा ठूलो सप्राइज आएको छ। साउथ फिल्मका हिट अभिनेता महेश अब सिंगापुरमा बस्ने भएका छन्। तर, उनी त्यहाँ घर बनाएर सर्न लागेका भने होइनन्। विश्वकै ध्यान खिच्न सफल सिंगापुरको एक संग्राहलयमा महेशको स्ट्याचु राख्न लागिएको हो। सिंगापुरको मेडन तुफान संग्राहलयमा अब उनको वेक्स स्ट्याचु राखिने भएको छ। […]
लियो क्लब अफ नेपालगञ्ज खजुराको अध्यक्षमा एन्जल खड्का
१२ जेष्ठ २०७६, आईतवार २१:३५ May 27, 2019 फ्रन्टलाईन नेपाल
काठमाडौं, जेठ ११ । लियो क्लब अफ नेपालगञ्ज खजुराको अध्यक्षमा एन्जल खड्का निर्बिरोध निर्बाचित भएकी छिन् । लियो क्लब अफ नेपालगञ्ज खजुराको चौथो साधारण सभाबाट अध्यक्ष पदमा खड्का निर्बिरोध निर्बाचित भएकी हुन् । त्यस्तै सचिबमा अरुणा गुरुङ, कोषाध्यक्षमा रबिना खड्का निर्बाचित भएका छन् । लियो क्लब अफ नेपालगञ्ज खजुराकी अध्यक्ष खड्काले अब बिशेषगरी स्कुल, कलेजहरुमा […]
युट्युबबाट चम्किएका चेली
नेपालका युवा चित्रकुमार कार्की ‘च्याम्पियन्स बुक अफ वल्र्ड रेकर्डस्’ सद्भाबना दूतमा नियुक्त